भाषा/साहित्य समीक्षा | मझेरी डट कम
HomSuvedi — Tue, 01/19/2021 - 15:02
२ नेपाली भाषामा वर्णविन्यासका समस्याका स्थानहरूः
क. केही निकटस्थ सन्दर्भः
लेखनबारेका केही तथ्यगत कुराहरू
HomSuvedi — Sat, 01/16/2021 - 20:54
पठन र पाठनमा आफूले जीवनका यो बेलासम्म बिताइयो । साना कक्षामा उहिल्यैदेखि भए पनि उच्च कक्षामा २०३८ सालदेखि अध्यापन थालियो र अहिले त रिटायर पनि भइसकियो । यो पक्ष अलग हो यसबारे कुरा रहून् ।
पढाउँदा कहिले पनि बेइमानी गरिएन बाटो पनि छोडिएन । साथीहरूमध्ये कति जना लामै यात्रामा वा भ्रमणमा दस पन्ध्र दिन जानुहुन्थ्यो र यता सर्लक्कै हाजिर गर्नुहुन्थ्यो आफूले त्यो उद्योग पनि गरिएन । यसबारे पनि नभनूँ धेर ।
editor — Sun, 09/06/2020 - 12:32
कुनै पनि राष्ट्रलाई चिनाउन भाषाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । भाषाले नै राष्ट्र, राष्ट्रियता एवं राष्ट्रको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक अवस्था तथा मूल्य र मान्यताहरूलाई चिनाउने काम गर्दछ । तसर्थ नेपाली भाषाले नेपाल र नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने काम गरेको छ । नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं जातीय अवस्थालाई विश्वसामु चिनाउने काम नेपाली भाषाले गरेको छ । भाषाबिना मानिसको जीवन र राष्ट्र अघि बढ्न सक्दैन । त्यसै प्रकारले नेपाल र नेपालीहरूका लागि नेपाली भाषा महत्वपूर्ण अङ्ग बनेको कुरा सर्वविदितै छ । नेपालको इतिहाससँगै भाषिक इतिहास पनि जोडिएको छ । तसर्थ यहाँ नेपाली भाषा सँगसँगै बझाङी भाषाको संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
भाषाको भासमा देश : लवजमा डुब्दै छ परिवेश !
editor — Fri, 09/04/2020 - 17:55
हामी भ्रमणका सिलसिलामा विदेशी भूमिमा रहँदा कसैले यसो पछाडिबाट कोट्याएर ‘तपाईंको देश कुन हो ? के तपाईं नेपाली हो ?’ भनेर हामीलाई सोध्यो भने त्यो बेला हाम्रो मनमा हुने खुसीको वर्णन भाषामा गरेर पक्कै पनि सकिँदैन ।
गज्जबको कुरो के छ भने संसारको कुनै पनि मानिसलाई उसको अनुहार, रङ, भाषा, संस्कृति र वेशवुषाले चिनाएको हुन्छ । तपाईं अमेरिका जानुस् या अजरबैजान तपाईंले बोल्ने नेपाली भाषाले त्यो विदेशी भूमिमा रहेका अचिनारू नेपालीलाई स्वत: प्रभाव पार्दछ । त्यसबेला तपाईंहरू अनायासै नजिकिनुहुन्छ जसमा जोड्ने काम भाषाले गरेको हुन्छ ।
editor — Sun, 09/22/2019 - 18:12
editor — Sat, 05/11/2019 - 10:11
अब नेपालमा भाषिक आन्दोलनको नवीन प्रवृत्तिको खाँचो महसुस भएको छ । तथाकथित सभ्य भनिएको समाज र शिक्षा आर्जन गरी भविष्यको सपना तुन्नेको खोक्रो रवाफ बोक्दा नेपाली भाषा र मातृभाषाको प्रयोग गर्न चाहँदैन । आवश्यकतै ठान्दैन । भाषा विद्रुप, कुरूप बन्दा, आधा मिश्रणलाई देख्दा नेपाली भाषा पढ्ने र पढाउने तथा सरोकार राख्नेको जिम्मेवारी भनिदिन्छन् । गोरखापत्रलाई एकछिन सम्झेजस्तो गर्छ, भाषा आयोगलाई आरोप लगाउँछ, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दायित्वमा पुर्याएर आफू पन्सिन्छ । अँझ भाषा आयोगतिर त चोर औँलो नै तेर्स्याउँछ ।
मातृभाषालाई अब कसले जोगाउँछ ?
editor — Sat, 01/12/2019 - 22:18
‘मलाई मेरो भाषा जानेर के फाइदा ? मैले जागिर पाउँछु र ?’ एक जना घनिष्ट मित्रले कुरैकुरामा भन्नुभयो । मैले भनेँ अब तपाईँले बोल्ने भाषालाई मैले बोल्न कोसिस गरौँ भने मलाई वर्षौँ सिकेर पनि तपाईँको जति ज्ञान हुन सक्दैन । उहाँले आफ्नो भाषा जोगाउनुको अर्थलाई मात्र गाँस, बास र कपासको सन्दर्भमा लगेर जोड्नुभयो । उहाँ दोषी हुनुभयो भनौँ भने बाध्यतामा राष्ट्रियता र स्वाभिमान खोक्रो हुँदो रहेछ । मलाई याद छ, शिक्षित वर्गका एक जना मित्रले भन्नुभएको थियो, “आमाबाबाले बोर्डिङ पढाउनुभयो । घरमा आफूहरू मात्र गुरुङ भाषामा बोल्नुहुन्छ । मसँग बोल्दा नेपालीमा कुरा गर्नुहुन्छ । स्कुलमा अङ्ग्रेजी पढियो । त्यहाँ नेपाली बोले बापत फाइन तिरियो ।
लेख बालबालिकामा हुने सिर्जनात्मक लेखन क्षमता
editor — Sun, 09/30/2018 - 01:44
केही नभएको ठाउँमा केही हुनु सिर्जना हो । अभावमा पूर्ति वा शून्यमा भण्डारण गर्नुले पनि यसैलाई सङ्केत गर्दछ । खाली जग्गामा बिउ छरेर, खेत जोतेर अनि रोपेर असारमा कर्म गरेपछि मङ्सिरमा किसानले अन्नबाली भित्र्याउँछन् । यो उसको सिर्जना हो । सामान्य व्यक्तिले लेखपढ गर्छ अनि अरूले लेखेको देखेर कविता लेख्छ । निरक्षर भए पनि गुन्गुनाउँदा गुन्गुनाउँदै मिठो गीत बन्छ, लिपिबद्ध गर्न सक्यो भने मनभित्र उब्जिएका भावनालाई शब्दमा उतार्दा कहिले निबन्ध बन्छ, त्यसैमा घटनाको शृङ्खला, पात्र र परिवेशको संयोजन गर्न सकियो भने कथा बन्छ । धेरै पात्र थुपारेर संवादका माध्यमबाट प्रस्तुत हुने बाटो खोज्यो भने एकाङ्की वा नाटक बन्छ ।
HomSuvedi — Sun, 05/13/2018 - 15:04
भाव वा रसका लागि उपयुक्त ठहराइएका केही छन्दहरुः
मदलेखाः प्राकृतिक सौन्दर्यको वर्णनका लागि उपयुक्त
चम्पकमालाः	कोमल पदावलीका साथ श्रृङ्गार
शशिवदनाः	प्राकृतिक सौन्दर्यको वर्णनका लागि उपयुक्त
समानिकाः वीर र रौद्ररसका लागि
अनुष्टुप् सबै रसका लागि
प्रमाणिकाः	वीर रस
इन्द्रबज्राः	करुण रस
स्वागताः	वीर र करुण रस
इन्दिराः	भक्तिरस वा गीति रचनामा
भुजङ्गप्रयातः	शान्तरस कोमल पदावली
इन्द्रवंशाः	सबै भावमा उपुक्त
द्रुतविलम्बितः	प्रकृतिको वर्णनमा । यमक अलङ्कार विशेष
प्रहर्षिणीः	सौन्दर्य वर्णन
वसन्ततिलकाः	प्राकृतिक सौन्दर्यको वर्णनमा र करुण रस
पुण्यप्रसाद प्रसाईंको उपन्यास "आईमाई मान्छे"
सपनाहरूको धुले बाटो
फगत मेरो प्रश्न तिम्रो लागि
तत्कालीन राज्यव्यवस्थाको दस्तावेज